" मन्दिर भावनाले चल्ने हो " - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
नेपाल सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र (एनसिएससी), नेपाली मन्दिर,टेक्सस
तपाईका आगामी योजनाहरु के कस्ता छन्, बताइदिनुहोस् न ?
अहिले नेपाल सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र (एनसीएससी) ले आफ्ना कार्यक्रमलाई २ भागमा बाडेर अगाडि बढ्ने छ । हाम्रो यो केन्द्रको दैनिक जस्तो काम भनौं या नियमित कामको रुपमा नेपाली मन्दिरमा हुने हाम्रा हिन्दुधर्म तथा बौद्ध धर्म सम्बन्धित विभिन्न पर्वहरु मनाउने एउटा कार्यक्रम त छदैछ । यसलाई अझ व्यवस्थित रुपमा मनाउन हाम्रो पहल रहनेछ । अर्को महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा युलेसमा बनाउन लागिएको नेपाली मन्दिरलाई आवश्यक रकम संकलनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तर्फ केन्द्रले ध्यान दिनेछ ।
मन्दिरमा हुने नियमित कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने सोंच बनाउनुभएको छ ?
हामी सबैंको आस्थाको केन्द्रको रुपमा नेपाली मन्दिर रहेको छ । मन्दिरमा हिन्दु धर्म तथा बौद्ध धर्मस“ग सम्बन्धित पर्वहरुमा विशेष पुजा कार्यक्रम हुदैं आएको छ । यी नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यो वर्ष हामीले शिवरात्रीमा ३ दिने शिवपुराण लगाउने योजना बनाएका छौं । श्रीमद्भागवत सप्ताहव्यापी ज्ञान महायज्ञ समेत यो वर्ष लगाउने तयारीमा हामी छौं । पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा महायज्ञ लगाइएको थियो । यी कार्यक्रमले आर्थिक संकलनमा समेत टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्ष्ा रहेको छ । मन्दिरमा हुने आइतवारको विशेष पुजा कार्यक्रम समेत आर्थिक संकलनको हिसावले पनि राम्रो भैरहेको छ, यसलाई पनि हामीले विशेष महत्व दिएर अघिबढ्ने सोंच राखेका छौं । मन्दिर व्यवस्थापनको खर्च आफैं धान्नुका साथैं केही आर्थिक रुपमा समेत बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ हाम्रो जोड रहन्छ । हामीले यो वर्ष बुद्ध जयन्तीलाई पनि अलि विशेष रुपमा मनाउन चाहेका छौं, त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान रहनेछ ।
मन्दिर भन्ने वित्तिकैं आस्थाको केन्द्र हो, जहा धर्म र संस्कृति जोडिएको हुन्छ यसतर्फ के सोंच्नु भएको छ ?
पक्कैपनि मन्दिरलाई हामीले मन्दिरको रुपमा मात्र लिनुहुदैंन । यो त हामी सबैंको आस्थाको केन्द्र हो । धर्म, संस्कृति, संस्कार, नैतिकताको आधार हो । अझ प्रवासमा त झन् हाम्रो परिचयमा समेत यसले भूमिका खेल्ने गरेको हुन्छ । मन्दिरमा दैनिक पुजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रमहरु त हुन्छ नैं हामीले यसमा अध्यात्म ज्ञानलाई समेत महत्व दिदैं आएका छौं । खासगरी हाम्रो दोस्रो पुस्ता भनौं या हाम्रा बालबालिकालाई अध्यात्मसग जोड्दैं हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति बारे जानकार गराउने हाम्रो प्रयास रहदैं आएको छ । त्यसैले हामीले प्रत्येक वर्ष आध्यात्मिक शिविर संचालन गर्दै आएका छौं, त्यो समर क्याम्पलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछौं । योग ध्यान शिविर समेत संचालन गर्नेछौं । बालबालिकालाई जव सम्म हाम्रो भाषा र कलाबारे जानकारी गराउन सकिदैंन तवसम्म हाम्रो संस्कृतिको हस्तान्तरण गर्न पनि गाह्रो पर्छ । यसलाई बुझेर कार्यक्रमहरु संचालन हुनेछ । नेपाली समाज टेक्ससले नेपाली पाठशाला संचालन गरिरहेको छ, त्यसले भाषा सिक्न हाम्रा बालबालिकालाई ठूलो योगदान पुगेको छ । मन्दिरमैं पाठशाला संचालन हु“दा स“गस“गैं अध्यात्मस“ग पनि बालबालिका जोडिन पुगेका छन् । बालबालिकालाई हामीले हाम्रो संस्कृति सग जोड्न सरस्वती पुजा समेत सामुहिक रुपमा बालबालिकालाई भेला गराएर मनाउने गरेका छौं । हाम्रो ध्यान धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना र प्रवद्र्दनमा रहेको छ । र म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण अभिभावकहरुलाई तपाईहरु मन्दिर आउदा बच्चा ल्याउने गर्नुहोस्, यसले उनीहरुमा हाम्रो भाषा,साहित्य,संस्कृति, हिन्दु धर्म, बुद्ध धर्मको आदिका बारेमा जानकारी हासिल गर्न सहयोग पुर्याउदछ ।
मन्दिरमा सबैंलाई आउन तपाईको केही भन्नु छ ?
हेर्नुहोस् मन्दिर भनेको सबैंको साझा आस्थाको केन्द्र हो । म सबैंलाई मन्दिरमा आउन आग्रह पनि गर्न चाहन्छु । डोनेशन(आर्थिक सहयोग)को हिसावले ६ सय परिवारको सहयोग मन्दिर निर्माणमा रहेको छ । यसको सम्पक्ति खरीदमा परेको छ । तर यो मन्दिरको जग्गा र भवन भन्दा धेरैं माथि हाम्रो आस्था हो । हामी सबैंको धर्म त्यसमा जोडिएको छ, यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा ठाउ हो । म सबैंलाई यही अनुरोध गर्दछु कि मन्दिर चल्ने भनेको पैसाले होइन भावना ले चल्ने हो । विदेशी भूमिमा हाम्रो धर्म संस्कृति जगेर्ना गर्न मन्दिरको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । आर्थिक सहयोग गर्नेहरु वा हामी अहिले १५ जनाको जुन कार्यसमिति बनेको छ त्यसको मात्र मन्दिर होइन हामी सबैं नेपालीको मन्दिर हो । जो सग जे छ त्यही दिदा पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ । समय हुनेले समय, धन हुनेले धन, दुवैं हुनेले दुवैं जे सकिन्छ त्यही दिने हो, त्यही दिनुहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु । जतिसक्नुहुन्छ मन्दिरमा आउनुहोस् म सम्पूर्ण नेपालीमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथ साथैं नेपाली मन्दिर हामी सबैंको सत्प्रयासवाट यहासम्म अइपुगेको छ, अझ धेरैं गर्न बाकी छ । हामी सबैं संघ संस्थासगको सहकार्यमा अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।
अहिले मन्दिर परिसरमा नेपाली समाज टेक्ससले स्वास्थ्य शिविर चलाउदैं आएको छ, एभरेष्ट लायन्स क्लबले पनि आखा शिविर लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ, ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाले रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएको छ, लगायत अन्य संघसंस्थाले पनि सामाजिक सेवाका कामहरु ग्र्दै आएका छन् । म अन्य संघ संस्थाहरुलाई पनि खुला रुपमा सहकार्यको आग्रह गर्न चाहन्छु । यो हामीसबैंको साझा स्थल हो, सामाजिक सेवाका कामहरु मिलेर गर्न केन्द्र तयार नैं रहेको छ । म सबैं सामाजिक संस्थाहरुलाई त्यसका लागि स्वागत गर्न चाहन्छु । म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु मन्दिर भावनाले चल्ने हो । सबैंको सकारात्मक भावनाको आशा राखेको छु । हो मन्दिरको विल्डिग (भवन) बनाउन पैसा चाहिएला चाहिएको पनि छ तर त्यो भवन बनाउन हो, पूर्वाधार जोड्न हो , त्यो मन्दिर चलाउनको लागि होइन त्यसैले मन्दिर चल्ने भावनाले भएकाले म सबैंलाई त्यो भावना राख्न सबैंमा विशेष अनुरोध गर्दछु ।
सबैं नेपालीलाई जोड्न के गर्ने सोंच रहेको छ ?
हामीले पहिला देखिनैं सम्पूर्ण नेपालीको केन्द्रको रुपमा नैं यसलाई अगाडि बढाएका छौं । सवैं आउनसक्ने साझा थलोको रुपमा यसलाई विकास गरेका छौं । पहिलो कुरा श्री पशुपतिनाथ मन्दिर र बौद्धनाथ मन्दिरको रुपमा यो रहेको छ । अहिले एउटैं मन्दिर भित्र बुद्ध मूर्ति पनि राखिएको छ तर अव युलेसमा बन्ने प्रोजेक्टमा बौद्ध स्तुपा मन्दिर परिसर भित्र तर अलग्गैं बनाउने तयारी भैरहेको छ । सम्पूर्ण नेपाली भाषीको साझा स्थलको रुपमा यसलाई विकास गरेर लग्न केन्द्रको जोड रहेको छ ।